Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha XPON ONU | Shiinaha XPON ONU Factory
34234GDE waa qalabka terminal ee taxane ah XPON kaas oo si buuxda ugu hogaansama heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 lana kulmo tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3. Waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyada GPON ee qaangaarka ah oo deggan oo qaali ah oo qaata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn fudud, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 34234GDE wuxuu qaataa MTK MT7603EN iyo MT7612EN oo loogu talagalay barnaamijka WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n iyo ...
34123GDE 1GE + 3FE + Weelasha + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
34123GDE waa qalabka terminal ee taxane ah XPON kaas oo si buuxda ugu hogaansama heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 lana kulmo tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3. Waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyada GPON ee qaangaarka ah oo deggan oo qaali ah oo qaata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn fudud, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 34123GDE wuxuu qaataa MTK MT7603EN qorshaha arjiga WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard. Sidoo kale ...
32123GDE 1GE + 1FE + Weelasha + CATV + 2.4G WIFI XPON ONU
32123GDE waa qalabka terminal-ka taxane ah ee XPON oo si buuxda ugu hogaansama heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 isla markaana la kulma tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3. Waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyada GPON ee qaangaarka ah oo deggan oo qaali ah oo qaata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn sahlan, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 32123GDE wuxuu qaataa MTK MT7603EN qorshaha barnaamijka WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard.It sidoo kale p ...
3434GE2 waa aaladda terminal-ka ee taxane XPON ah oo si buuxda ugu hoggaansan heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 lana kulma tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3, kaas oo ku saleysan bislaansho iyo xasillooni, iyo kharash aad u sarreeya- tiknoolajiyada GPON ee wax ku oolka ah ee qaadata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn sahlan, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 3434GE2 waxay taageertaa WIFI4 (IEEE802.11b / g / n) iyo WIFI5 (IEEE802.11ac). Waxay sidoo kale siisaa maamulayaasha WEB ...
3413GE 1GE + 3FE + Weelasha + 2.4G WIFI XPON ONU
3413GE waa qalabka terminal ee taxane ah XPON kaas oo si buuxda ugu hoggaansamaya heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 isla markaana la kulma tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3. Waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyada GPON ee qaangaarka ah ee xasilloon iyo kharashka badan ee wax ku oolka ah oo qaata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn sahlan, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 3413GE wuxuu qaataa MTK MT7603EN qorshaha barnaamijka WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard.It sidoo kale provi ...
3412GDE waa qalabka terminal ee taxane ah XPON kaas oo si buuxda ugu hogaansama heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 lana kulmo tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3. Waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyada GPON ee qaangaarka ah oo deggan oo qaali ah oo qaata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn fudud, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 3412GDE wuxuu qaataa MTK MT7603EN qorshaha arjiga WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard. Waxaa sidoo kale p ...
3213GE 1GE + 1FE + Weelasha + 2.4G WIFI XPON ONU
3213GE waa qalabka terminal-ka ee taxane XPON ah oo si buuxda ugu hoggaansama heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 isla markaana la kulma tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3. Waxay ku saleysan tahay tiknoolajiyada GPON ee qaangaarka ah oo deggan oo qaali ah oo qaata waxqabadka sare ee XPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn fudud, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 3213GE wuxuu qaata MTK MT7603EN qorshaha arjiga WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard. Waxa kale oo ay pro ...
341GE waa aaladda terminal-ka ee GPON taxane ah oo si buuxda ugu hoggaansan heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 isla markaana la kulma tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3, kaas oo ku saleysan qaan-gaar, xasilloon oo qiimo-wax ku ool ah. Teknolojiyada GPON ee qaadata waxqabadka sare ee GPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn sahlan, qaabeyn dabacsan, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 341GE wuxuu qaataa MTK MT7603EN qorshaha arjiga WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard. Waxa kale oo ay provi ...
321GE waa qalabka terminal-ka taxane ah ee XPON oo si buuxda ugu hogaansama heerka ITU-G.984.1 / 2/3/4 isla markaana la kulma tamarta keydinta ee borotokoolka G.987.3, kaas oo ku saleysan bislaansho, xasilooni iyo qiimo sare wax ku ool ah. Teknolojiyada GPON ee qaadata waxqabadka sare ee GPON ZTE chipset oo leh kalsooni sare, maareyn sahlan, qaabeyn rogrogmi karta, xoog, dammaanad adeeg tayo wanaagsan leh (Qos). 321GE wuxuu qaataa MTK MT7603EN qorshaha arjiga WIFI ee taageera IEEE802.11b / g / n standard. Waxa kale oo ay ...